हुबहु पास भएन बालेनको नीति कार्यक्रम, गर्नुपर्यो झिनाझपेटी ! - Media Dabali
हुबहु पास भएन बालेनको नीति कार्यक्रम, गर्नुपर्यो झिनाझपेटी !
काठमाडौं - काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव सहित सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
महानगरपालिकाले ११ औं नगरसभाको दोस्रो बैठकले नगरसभा सदस्यहरुले प्रस्ताव गरेको संशोधन सहित पारित भएको हो ।
महानगरका मेयर बालेन साहले नगरसभा सदस्यहरुले उठाएको विषयहरुलाई संशोधनसहित स्वीकार गरेर अगाडी जाने बताउँदै संशोधन सहित नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । जसलाई नगर सभा सदस्यहरुले सर्वसम्मत पास गरेका हुन् ।
नगरसभा सदस्यहरुले काठमाडौं वडाहरुको भवन निर्माणदेखि टुँडिखेल खाली गर्नेसम्म माग गरेका थिए । सभामा बोल्दै वडा नं. ९ का टेकराज अधिकारीले वडा वडामा मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
यस्तै वडा नं. २९ का सन्तोष ढुंगेलले महानगरको कार्यालयमा दोभासेको अभावले कान नुसन्नेहरुको लागि समस्या भएको बताएका थिए । ढुंगेलले निर्माण हुन बाँकी रहेका वडा भवनहरु तत्काल बनाउनुपर्ने बताउँदै प्रत्येक वडामा मेलमिलापकर्ताले काम गर्न नसकेको भन्दै प्रभावकारी बनाउन माग गरे ।
नगर सभासदस्य शोभादेवी मानन्धरले नक्सा पास नगरी बनाएका घर घरधनीकै खर्चमा भत्काउने वा नक्सा पास गराउनको लागि पहल गर्नुपर्ने बताइन् । उनले नीति तथा कार्यक्रम शब्दमा राम्रो आएकोले व्यवहारमा उतार्न आवश्यक रहेको बताइन् ।